“ မမေ့နိုင်စရာအတည် ယနေ့တိုင်ပါပြီ။´´ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “ မမေ့နိုင်စရာအတည် ယနေ့တိုင်ပါပြီ။´´
“ မမေ့နိုင်စရာအတည် ယနေ့တိုင်ပါပြီ။´´
Posted by ခင်ခ on Aug 6, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary | 21 comments
၈ရက် ၈ လ ၈၈ ၀ယ်
၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံအတွက် တိုက်တွန်းကာဝေခဲ့ကြသော လှုံဆော်စာတွေက တစ်ခုပါ၊ အဲဒီတုန်းက အများ ကြီးပေါ့ ရင်ထဲမှာကိန်းအောင်းကာ ခံစားနေရတဲ့ အဲဒီတုန်းက တစ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကို တွန်းလှန်ချင်ကြတဲ့ ရင်တွင်းရိုက်ခတ်သံအမှန်တွေက ပဲ့တင်ထပ်ကာ ကဗျာတစ်သွယ် စာလိုတစ်မျိုး ကာတွန်းတစ်နည်း ထွက်ပေါ် ဖြန့်ဝေခဲ့ကြပြီး တရားဟောသံတွေကလည်း လွှမ်းခြုံခဲ့ကြပါတယ်။ ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံဟာ ကျောင်းသား ပြည်သူလူထု ပေါင်းစည်းညီညွှတ်ခဲ့သမို့ တစ်ပါတီအာဏာရှင်အစိုးရကို အဆုံးသတ်ဖြုတ်နိုင်ဖို့ရန် အားဖြစ်ခဲ့ပြီး ထိုစဉ်က နိုင်ငံရေးသြဇာအကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ မဆလ(မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ)ခေါင်းဆောင် ဦးနေ၀င်း ဟာ အရေးမလှတော့တာကို အကင်းပါးကာ တစ်ပါတီကြိုက်သလား နှစ်ပါတီကြိုက်လား ပါတီစုံကြိုက်လား ဟူသောမေးခွန်းများနှင့်အတူ ၁၉၆၂ခုနှစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်းရှိ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အဦး ကို မှိုင်းခွဲဖြိုဖျက်ခဲ့တဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုအစဖော်ကာ တို့မီး ရှို့မီး မိန်းခွန်းတစ်ရပ်ကို တိုင်းပြည်သို့လွှင့်ခဲ့ပြီး ကျွန်တော်နှင့်အတူ ၁။ဦးစန်းယု ၂။ဦးအေးကို ၃။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ထင် စတဲ့ ၄ ယောက် နိုင်ငံရေးလောက က အနားယူပါမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာခြင်းသည် တစ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ်၏ အဆုံးသတ်အရှိန်ကုန်ရာအစပင် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့မှုသမိုင်း ယခုငွေရတုအချိန်ကိုရောက်ခဲ့ပြီပေါ့၊ ၈၈၈၈ ငွေရတုကိုလည်း အခုဆို ရန်ကုန်မှာ ကျင်းပနေပါပြီ။ ထိုစဉ်က အရေးတော်ပုံမှာပါဝင်ဆင်နွဲခဲ့ကြပြီး ကျဆုံးသွားတဲ့ကျောင်းသားတွေ စစ်အစိုးရ အာဏာသိမ်းပြီး ကိုယ်ခံယူချက်အရ နယ်စပ်ရောက်ကျောင်းသားတွေနဲ့ ကိုယ့်ပြည်တော်မှာနေချင်သော်လည်း အခြေအနေမရလို့ တိမ်းရှောင်ရင်းဖြင့် ရေခြားမြေခြားတိုင်းတစ်ပါးရောက် ကျောင်းသားတွေကို ဂုဏ်ပြုကာ ရေးလိုက်ရပါသည်။
စာကြွင်း – ယောက်ျားဆိုတာ တိုင်းပြည်အတွက် အရေးရယ်အကြောင်းရယ်ဆို ဓားလှံလက်နက်စွဲကာ အားအင် အပြည့်နဲ့ ရှိကိုရှိရပါ့မယ်၊ ကလူအိသို့ မြှုအိသို့လို ကနွဲကယနဲ့ ကျား မကျ မ မကျတွေကိုတော့ သနားလိုက် ပါဘိကွယ်။
( မမေ့နိုင်သေးသော ၈၈၈၈ အတွက်ပါ )
အဟိ နောက်ဆုံး မှာတော့ ဂေးလားဟေ့ မောင်တို့ ပါလား …:-D
ဦး ဂျစ် ရေ ရွာထဲလည်း တစ်ခါတလေကျ ရာသီဂွင် နဲ့ ညီအောင်လည်းပါရသပေါ့ဗျာ။
၀ါးသားဖောလိုး ဖစ်ဖောလိုး ဆိုသလိုပေါ့ဗျာ။
ဟိုလူဂျီး လုအခွင့်အရေး ဆိုင်းဘုတ်ကြီး ကိုင်လို့ ရောက်လာဦးမယ် ထင်ပါကြောင်း..
ဒါဆို ဒါက ပရီပေါ့ Min Zarni ရေ။ ထပ်လာခဲ့ပါနော်။
အနော်ရော တိုင်းပြည် အတွက် အရေးဟယ် အကြောင်းဟယ် ဆို ပါလို့ရသလားဟမ်။
ဟိုမကျ ဒီမကျတွေက ပိုနွဲ့တယ်ထင်တာဘဲဗျ။ KZ တို့ကတော့ ဘာလောင်းကျော်ဆိုလား အဲလိုဖြစ်မယ် ထင်ပါ၏ ရေးပုံခန့်မှန်းကြည့်မိတာလေ။
မမေ့နိုင်တာ အမှန်ပါပဲ လေးခရေ…
အဲသည့်ဘဲကြီး သူတင် တိုင်းပြည်ကို အားရအောင်ဖျက်တာ မဟုတ်…
သူ့ဒူးမနာသားတွေ လက်ထဲအပ်ပြီး၊ စိတ်ဓာတ်တွေ ခြေဖဝါးအောက်ရောက်အောင်
များတို့လည်း အလှဖန်တီးရှင်များသမဂ္ဂဆိုပြီး အရေးအခင်းမှာ ခါတော်မှီပါလိုက်ကြသေးတယ်
အဲ့ဒီတုန်းက မအူမလည်နဲ့ ကိုဒက် မင်မလာလေးကိုင်ပြီးဟိုရိုက်ဒီရိုက်
များတို့အဖွဲ့ မြို့ထဲလှည့်လည်ဆန္ဒပြတဲ့ထဲ လိုက်ပါချီတက်တာတွေ့ပါတယ် ကိုကျောက်ရေ။
အာဏာရှင်အစိုးရ ( အဲလိုရှေ့တိုင်ပြီးအော်ပေးရင်) သူတို့က လက်ကလေးတွေ စလိုမိုးရှင်းနှုန်းနဲ့မြှောက်ပြီး အလိုမရှိ ( ဂေး သံနဲ့ ကီးနှိပ့်ပြီး ဖတ်စေချင်) အဲလိုအော်တယ်လေ။ သူတို့ ပုံစံ သူတို့အော်သံနားထောင်ပြီး သပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြချီတက်သူတွေ ရီမောခဲ့ရတဲ့ မြင်ကွင်းကို ပြန်မြင်မိသဗျ။
88 ဆိုတော့ တမီးက မွေးသေးဘူးလေ….
အဲဒီအချိန်တုန်းက မိဗုံတို့ မမွေးသေးဘူးကိုး။
အဲဒီ ၈၈ မှာ လေးခွလိုမျိုးသဏ္ဍန် သရေပတ်မှာချိတ်ပြီး ပစ်ရတဲ့ ဂျင်ကလိ ဆိုတဲ့အရာတစ်ခု ပြည်သူလူထုမှ ထွင်ပြီး ခေတ်စားခဲ့ဖူးတဲ့ လက်နက်ငယ်တစ်ခုပေါ့။ သူရဲ့ထိပ်မှာ သံချွန်ဖြစ်နေတာကြောင့် အပစ်ခံရကာ ထိတဲ့သူကို ဒဏ်ရာအတော်ရ အထိနာစေခဲ့တာပေါ့။ ပြည်သူလူထုက အဲဒီ ဂျင်ကလိနဲ့ လက်နက်အားကိုး အာဏာစိုးတွေကို အံတုခဲ့ကြတာပေါ့ကွယ်။
မစင်ပုံကိုမီးရှို့ပြီး ဂျင်ကလိအတွက် အဆိပ်လုပ်ကြတာလေ…
ပြန်တွေးကြည့်ရင် တကယ့် ခေတ်ပျက်ကြီးကို ဖြတ်လာရတာ…
ပုလင်းထဲ ဓာတ်ဆီထဲ့ ထိပ်မှာ အ၀တ်စတပ် မီးရှို့ကာ မီးလောင်ဗုံးသဘောမျိုးလုပ် စစ်ကားလာရင် လှမ်းပစ် သြော် နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ ပြန်အံတုခဲ့ကြတဲ့ လူထုပေါ့ ကိုကျောက်ရေ။
ဒို့များကိ်ု ဆန့်ကျင်သူတွေကို.. ဆန့်ကျင်ရေး..
အဲဒီတုန်းက အစိုးရရုံးတွေ ဓါတ်မီးတိုင်တွေဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့သူတွေက တိုင်းပြည်ကို ဖျက်ဆီးသူတွေပါဘဲ။
သူတစ်ပါး အသက် သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပေမယ့် အဲဒီ အချိန်တုန်းကတော့ လူစိတ်မရှိတဲ့ ကောင်တွေ ချဟာ ဆိုပြီး…
ရပ်ကွက် ကွန်မန်ဒိုတွေရဲ့ဂျင်ဂလိ၊ တုတ် ဓါးလက်နက်စုံကို ၀က်ခြံထဲမှာ ၀ှက်ထားပြီး လက်နက် တာဝန်ခံ လုပ်ခဲ့တာ
ကိုယ့်လူတွေ ထွက်ခါနီးရင် မှာရသေးတယ်… မသေချင်နေပါစေကွာ.. ခြေသလုံးလောက်တော့ မှန်အောင်ပစ်ခဲ့ဟ…
ဂျင်ကလိက ရှားတယ်..လို့ မှာတတ်တာ ခေါင်ဗျ..။ စစ်တပ်ကကောင်တွေက ဂျင်ကလိ အသေကြောက်တော့ ပန်းပဲဖိုတွေပါ
ပိုက်စိတ်တိုက်လိုက်တာ..ဖမ်းတာ…။ လက်မတည့်တဲ့ ကောင်ဆို ၀ါးရင်းတုတ်နဲ့ ဓါးထုတ်ပေးတာ… ခေါင်ပေါ့…။
လွမ်းလည်းလွမ်း…. နာလဲ နာကျင်နေတုန်းပါဘဲ…။
မျက်နှာကို အ၀တ်စည်းပြီး ချောင်းစပ်မှာ မောင်းဖြုတ်ကာနီးမှ… အသက်ဘေးက လွတ်ခဲ့တာ.. ခေါင် ပေ့ါ.။
( ကိုယ့်ဂုဏ် ကိုယ်ဖော် မသူတော် ဖြစ်နေပေမယ့်… မဆိုင်သလိုမနေတတ်ခဲ့တာလေး ပြောတာပါ )
ပါဝင်ဖူးကာ ရဲစွမ်းပြလာ ခေါင်ရယ် လေးစားပါတယ်ကွယ်။
အဲဒီအချိန်တုန်းက ပြည်သူလူထုဟာ နှစ်ပေါင်းဆယ်ချီ ခါးစည်းခံခဲ့ရတဲ့ အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်မှု နဲ့ လူနည်းစုကောင်းစားရေးကို မခံနိုင်တဲ့အဆုံး ရရာလက်နက်ဆွဲကာ တွန်းလှန်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ခေတ်တစ်ခုချုပ်ငြိမ်းအဆုံးသတ်ပေမယ့် အာဏာရှင်စနစ် နဲ့ လူနည်းစုကောင်းစားရေး ကတော့ ယနေ့ထက်တိုင်တည်ကာမြဲလို့ ရှိနေစဲပါလို့ ……….. ခေတ်ပြောင်းချိန် ရောက်ချင်မိ ပါပြီ ကျော်စွာခေါင်ရေ။
ဂျင်ဂလိ..ဂျင်ဂလိ.. တကယ်မမြင်ဖူးဘူးဗျ… 88 ဆိုတာ အဖေနဲ့အဖေ မင်ဂါဆောင်တဲ့အချိန်ဆိုတော့… အတင်းဆွဲယူစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် အဲ့တုန်းက အရေးအခင်းထဲမှာ သေပြီး ပြန်ဝင်စားတာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲနော်…
88 အကြောင်းကတော့ ဖတ်ရသမျှအကုန်လုံးက စိတ်ဝင်စားစရာ ဗဟုသုတတွေချည်းပဲ… ရင်နာတယ်..စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်…
၈၈ ခုနှစ် စစ်တပ်က အာဏာလွှဲယူပြီးကာလမှာပေါ့ ပြည်သူလူထု နဲ့ စစ်တပ် တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် အခြေအနေတွေ တစ်စတစ်စ တင်းမာလာတော့ စစ်တပ်ကလည်း ပစ်ခတ်မှုတွေရှိလာတယ်လေ။ မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီတုန်းက ကမ်းနားလမ်းမှာရှိတဲ့ ခြောက်ထပ်ရုံးပေါ်ကနေ ဆန္ဒပြချီတက်လာတဲ့ ပြည်သူလူထု နဲ့ ကျောင်းသားတွေကို လှမ်းပစ်တဲ့အခါ ဆန္ဒပြသူတွေရှေ့ဆက်မသွားတော့ဘဲ အဲဒီရုံးရှေ့မှာ ထိုင်ကာချလို့ “ဗိုလ်ချုပ်ပေးတဲ့စစ်ပညာ ပြည်သူတွေကို သတ်ဖို့မဟုတ်ဘူး´´ လို့ ကြွေးကြော်ကြတော့ စစ်တပ်ဖက်က ဆက်မပစ်တော့ဘဲ ရပ်ကာကြည့်နေတဲ့အဆင့်ကိုရောက်စေခဲ့တာလည်း လူထုအင်အားစုစည်းမှုပြယုဒ် တစ်ခုပေါ့ လုံမလေးရေ။ အဲဒီ ဆန္ဒပြသူတွေထဲမှာ သေနတ်တော့မပါပေမယ့် သမီးမမြင်ဘူးတဲ့ ဂျင်ကလိ တွေတော့ ပါတယ်လေ။
ဂျင်ကလိဆိုတာ.. သံချောင်းအချွန်ကို.. ထိပ်မှာ အထစ်ကလေးလုပ်ထားတာ.. မှိန်းသွားလိုပေါ့..
အဲဒီအထစ်ကလေးမှာ.. လေးခွသားရေပင်ချိပ်ပြီး.. လေးခွပစ်သလိုပစ်ရတာပါ..။
လူသွားစိုက်မိရင်.. အထစ်ပါတာမို့ ..ပြန်ထုတ်ရအင်မတန်ခက်ပါတယ်…